AnTuTu မှ Honor 9X သည် Kirin 810 နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်ကိုအတည်ပြုသည် Androidsis
El ဇူလိုင်လ 23 သည် Huawei လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီမှရွေးချယ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်l ဂုဏ်အသရေ 9X ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ် ဒီပစ္စည်းကိုဝန်းရံထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိပါသည်၊ သို့ဖြစ်ရာ၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုထင်ကြေးပေးခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရပုံရသောယိုစိမ့်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှပြိုင်ဘက်များကိုအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့်အလယ်အလတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည့် terminal နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်တပ်ဆင်မည့်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဟုဆိုသည် 810Qualcomm ၏မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအသစ်သည်မိုဘိုင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီသီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့, AnTuTu သည် Honor 9X ကို၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်အထက်ပါ SoC နှင့် Mali-G52 GPU တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြုမိစမ်းသပ်မှုထွက်စစ်ဆေးပါ!
AnTuTu မှ Honor 9X သည် Kirin 810 နှင့်အတူရောက်ရှိမည်ကိုအတည်ပြုသည်
အပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသော screenshots မ်ားသည်မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကိုပြောကြသည်။ "Huawei HLK-AL00" နှင့် "Huawei SEA-AL00"။ ၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်အချက်သုံးချက်နဲ့ကွာခြားပါတယ်။ RAM၊ internal storage capacity နှင့်ရမှတ်များ။
လူကြိုက်များသော benchmark ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းမှာ ၆ GB RAM၊6GB ROM မှတ်ဉာဏ်ရှိပြီး ၂၁၉,၈၀၉ ရမှတ်ရရှိသည်။ ၂၃၇,၄၃၇ မှတ်၊ ငါတို့မြင်နိုင်တယ်။
Promo ဗီဒီယိုအသစ်တွင် Honor 9X ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲရှိသည်
အမြင့်ဆုံးနံပါတ်များနှင့်အတူမူကွဲကြောင်းဖြစ်နိုင်သောလား ဂုဏ်အသရေ 9X Pro ကို? ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ သို့သော်၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသင့်ပေ။ သို့သော်သူတို့သည်၎င်းတို့သည် Kirin 810 SoC အတူတူတပ်ဆင်ထားသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူက၎င်းမော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံးတွင်၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုဖယ်ထုတ်မထားပါနှင့်။ ထိုအရာများ၏ခြားနားချက်ကိုဖော်ပြသောကိန်းဂဏန်းများ၊ ဓာတ်ပုံအပိုင်းများနှင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » AnTuTu စမ်းသပ်မှုများက Kirin 810 သည် Honor 9X တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုအတည်ပြုသည်
Cubot R19, တတ်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်
အမေဇုံ Prime Day 2019 ၏အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများ - တနင်္လာနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်